Ngaphambi kokwenza noma yini qiniseka ukuthi umhubhe yinkinga yangempela. Amanye amakhandlela abukeka sengathi ahubhukile empeleni aphethwe yimigodi. ikhandlela elibukeka sengathi lishunqiwe kodwa empeleni linezinkinga ze-crater Ungakwazi ukubona ukuthi inkinga isuka ku-CRATERS hhayi i-TUNNELING uma izinto ezimbili...
Ukuthunga amakhandlela kuyisimo sokuncibilika kwekhandlela phakathi nendawo ngaphandle kokuncibilikisa yonke ingcina ezungezile, kushiye ingcina eqinile emaphethelweni esitsha. Ilangabi elikwintambo lidala “umhubhe” ome mpo obheke phansi njengoba uvutha, ushiya ama-w...
Umbala Odumile Mayelana Nomkhumbi Wekhandlela
Izitsha zamakhandlela engilazi ziya ngokuya zithandwa ngabathengi. Bathanda ukwenza izimbiza zengilazi ngemibala ehlukene, njengokuphuzi, okumhlophe, okumnyama, okubomvana, njll. Sebenzisa iziqukathi zengilazi ezimibalabala ukuze u-DIY amakhandlela akho ayintandokazi anephunga elimnandi futhi ungeze ubumnandi empilweni. Kulesi sigaba, si...
Iziyalezo Zokwenza Amakhandlela
ngo admin ku 21-03-01
Indlela yokwenza amakhandlela e-glass jar? Okokuqala, sicela ulungise zonke izinto zokwenza amakhandlela anephunga elimnandi I-Soy wax, amafutha ephunga, isitsha sekhandlela, izitika zezintambo, idivayisi yokufaka intambo phakathi, ibhodwe, udayi wekhandlela Isinyathelo 1:Lungisa izitsha zakho zamakhandlela Esiyikho...
Izinyathelo zokuphepha ze-glass jar
Izinyathelo zokuqapha zokusetshenziswa kwezimbiza zekhandlela lengilazi : Izimbiza zekhandlela zeglasi le-Winby ziye zahlolwa ngokuqinile futhi zahlolwa ngaphambi kokuba zihambe embonini. Noma kunjalo, uma uyisebenzisa, usadinga ukunaka: ☞Sicela ususe izinto zokupakisha ngokucophelela ukuze ugweme ukushiya izigxivizo zeminwe noma imihuzuko...
Ukusetshenziswa kwamakhandlela anephunga elimnandi
Ukwethulwa kwamakhandlela anephunga elimnandi Amakhandlela e-Aromatherapy abe yindlela yokulungisa ukunambitheka kwempilo. Amakhandlela anephunga elimnandi anephunga elimnandi. Amakhandlela anephunga elimnandi awuhlobo lwamakhandlela obuciko. Zicebile ngokubukeka futhi zinhle ngombala. Isitshalo semvelo ess...